Fanadinam-panjakana :: Hatao amin’ny volana aogositra ny Bakalorea 2020 • AoRaha
Nivoaka ny tetiandro hanatanterahana ny fanadinana bakalorea amin’ity taom-pianarana 2019-2020 ity. Hatao amin’ny volana aogositra izany, araka ny fampahafantarana nataon’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teny Tsimbazaza, omaly. Amin’ny alatsinainy 17 ka hatramin’ny 21 aogositra 2020 ny Bakalorea ankapobeny sy ny Bakalorea teknika fihodinana voalohany. Amin’ny alatsinainy 24 ka hatramin’ny 27 aogositra 2020 ho an’ny Bakalorea teknika fihodinana faharoa.
Efa nanomboka tamin’ny 20 febroary lasa teo ny fisoratana anarana, ary hifarana amin’ny 30 avrily 2020 amin’ny 6 ora hariva. Hatao eny amin’ny Ofisin’ny Bakalorea manerana ireo oniversite ny fisoratana anarana.
Notsindrian’ny tao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa tsy hisy ny fanomezana alalana manokana ivelan’ireo daty voafaritra ireo.
Tsy niova ny saram-pisoratana anarana: 15 000 ariary ho an’ny mpiadina atolotry ny sekoly raha 50 000 ariary ny mpiadina misora-tena ary 100 000 ariary ny mpiadina teratany vahiny.
Hevitry ny mpampianatra
Mizara roa ny hevitr’ireo mpampianatra mikasika an’ity tetiandro ity. Mpampianatra vitsivitsy no milaza fa ho vita ara-potoana ny fandaharam-pianarany. Manana fotoana tsara hanaovana famerenan-desona sy fampiharana maromaro. Ny ankilany kosa miteny fa miankina amin’ny zava-mitranga no hahafahana mamita ny fandaharam-pianarana iray manontolo.
“Ao anatin’ny fitakiana an’ilay 50 000 ariary ny mpampianatra amin’izao fotoana izao. Tapitra androany (Ndrl:omaly) mantsy ny fe-potoana nomena ny fitondram-panjakana amin’ny tokony hamaliana an’io fitakiana io. Tsy fantatra raha hiroso amin’ny fitokonana na tsia. Fotoam-pahavaratra ihany koa isika ankehitriny ka tsy fantatra ny voka-dratsy hoentin’ny toetr’andro. Miankina amin’ireo lafiny roa ireo no hahafahana manatratra ny famitàna ny lesona”, hoy ny mpampianatra iray etsy amin’ny lisea Moderina Ampefiloha (LMA).
Sefo fokontany eto an-drenivohitra :: Hanendry olona iray amin’ireo telo lanin’ny fokonolona ny Prefektiora
Sarimihetsika :: Handefa horonantsary malagasy ny Cinépax